Konke Odinga Ukukwazi Ngokuhamba EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Konke Odinga Ukukwazi Ngokuhamba EYurophu
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi
(Kugcine ukubuyekezwa On: 01/04/2021)
Ake sithi uhlela ukuvakashela i-European Union nganoma yisiphi isikhathi kungekudala. Ngaleso sizathu, kukhona uchungechunge lwamathiphu futhi imininingwane ebalulekile yokuhamba lokho kuzosiza ukwenza isipiliyoni sakho sithokozise kakhulu. Umuntu angacabanga ukuthi akunakubakhona umehluko omkhulu impela kufayela le- ukucatshangelwa okudingekayo ukuhambela i-Europe ngokuqhathanisa nanoma iyiphi enye indawo emhlabeni. namanje, ngaphakathi kokunwetshwa okukhulu kwayo, kukhona uchungechunge lwamaphepha asemthethweni ongawadinga ukungena eYurophu njengesivakashi. Futhi, Isimo sezulu esihluke kakhulu, quirks, futhi imininingwane ethile yamasiko ibalulekile ukugcina engqondweni lapho.
1. Ukuya EYurophu: Bamba Iphasiphothi Yakho
Iphasiphothi yikhathazo eliyinhloko ngoba kuzoba ikhadi lakho lesethulo nokhiye ezweni lakho lokwamukela. Sizokunakekela ipasipoti kuqala. Uhulumeni wakho wokuqala unquma ukuthi yimaphi amazwe ozokwazi ukungena kuwo ngaphandle kokucubungula noma yiluphi uhlobo lwamaphepha akhethekile. Kuhlala njalo kungcono ukuthi ubheke ukuthi amanxusa akho asekhaya nasendaweni oya kuyo abenabo yini ubudlelwano bezokuxhumana noma isivumelwano ngesikhathi ohamba ngaso. Amazwe amaningi avela eMelika naseningizimu-mpumalanga ye-Asia anokufinyelela okungalawulwa emazweni amaningi aseYurophu.
Sengikushilo lokhu, uma kungenjalo; thola umeluleki wohambo olusemthethweni ongakuqondisa ngenkathi ucubungula izimvume zakho zokuhamba. Ungadinga futhi izitifiketi zezempilo nokunye okunikezwa ukufinyelela. Uma uthanda ukushayela ngenkathi uphesheya, uzodinga futhi i- imvume yokushayela yamazwe omhlaba. Uma uhlela ukwenza ibhizinisi, kungahle kube nezinye izimvume eziningi zomhlaba ezidingeka ukuhamba. Ungahlola ukuthi imaphi amaphepha adingekayo ngokuya ngenhloso yakho yokuhamba kuwebhusayithi kahulumeni wezwe elamukelayo.
ILyon iya eTououse Ngesitimela
EParis eya eTououse Ngesitimela
Ngijabulele i-Toulouse Ngesitimela
IBordeaux iya eTououse Ngesitimela
2. Funda Ukupakisha Ngokufanele
IYurophu iyizwekazi elikhulu futhi elihlukahlukene, kusukela emabhishi ase-Andalucia anelanga eSpain kuya eTundra eseqhwa empumalanga. Kubalulekile ukupakisha ngesimo sezulu engqondweni kanye nemisebenzi ozohlela ukuyenza phesheya. Khumbula ukuthi awupakisheli ukuphuma ezweni lakho, ungathathi kakhulu noma okuncane; lokhu kuzokwenza ulahlekelwe yisikhathi esincane sokuqoqa izingubo, sikusize endleleni eya esikhumulweni sezindiza, futhi ngisho imali ngu ukugwema imali yokukhuluphala ngokweqile. Kungcono ukuhlela isikhwama sakho sokuhamba noma isitayela samasutukesi, ukugoqa ibhulukwe lakho, amahembe, amasokisi, nezingubo zangaphansi ezinjenge-croissant bese uzibeka zonke zikhuluphele. Lokhu kugwema ubunzima bokugoqa izingubo zakho futhi kukusindise isikhala sokulingana imikhiqizo yenhlanzeko noma izinto zikagesi. Leli thiphu liyasiza futhi uma ufuna ukuletha izingubo ozithengile ohambweni. Esinye iseluleko esihle ukupakisha isikhwama esingeziwe sesipho sakho noma izinto zokuthenga.
3. Ukuya EYurophu: Vumela Amabhange Akho Akwazi Ukuthi Uzoba Kwelinye Izwe Futhi Uzochitha
Ukuhlasela ngamandla kwamakhadi esikweletu okwenzeka eminyakeni embalwa edlule kwenza amabhange ukuthi axwaye ingozi. Kuholele ekutheni basungule ibhulokhi kuqala babuze inqubomgomo kamuva lapho bebona kusetshenziswa ikhadi lesikweletu ezweni elingahleliwe. Kumele uvele mathupha ebhange lakho noma ubashayele ucingo ngoba izaziso eziku-inthanethi kwesinye isikhathi azinakwa. Ukuthatha lokhu kuhlinzekwa kuzogwema imizwa eyingozi nehlazo ngenkathi uthenga. Uma uya ebhange futhi kuwumqondo omuhle ukuthola imali yendawo lapho ukhona. Izimali zokushintshisana zigcwaliswa ngokungenangqondo kubavakashi ezitolo eziningi zaseYurophu futhi amaphuzu wokushintshana.
4. Ukuya EYurophu: Ukwenza kabusha
Uma uya "Ezwekazini Elidala,”Khumbula ukuphatha amadokhumende akho bese ukhokhela noma yiluphi uhlobo lwezimvume zomhlaba ezidingekayo. Lolu hlobo lwamaphepha lubalulekile uma uhlela ukuvakashela amazwe ahlukene ngaphakathi umthetho waseYurophu. Uma uhlela uhambo lomgwaqo, kuyadingeka ukuthi ube nemvume yokushayela yamazwe omhlaba futhi ugweme ukubhuka. Futhi, khumbula uku phakamisa kancane futhi ucabangele isimo sezulu nemisebenzi ozoyikhuthazelela phesheya. Hlala ubika ukuthi kumaphi amazwe ohlela ukusebenzisa imali kuwo futhi wenze ukushintshaniswa kwemali nezinhlangano ezigunyaziwe kuphela. Okokugcina, uthola ukuxhumana nabantu abehlukene, ukudla, amasiko, ungakhohlwa ukuzijabulisa futhi ujabulele isipiliyoni.
IDusseldorf iya eMunich Ngesitimela
Dresden eMunich Ngesitimela
ENuremberg eMunich Ngesitimela
Bonn eMunich Ngesitimela
Manje wazi konke odinga ukukwazi, thina ku Londoloza Isitimela, zilungele ukukusiza ngazo zonke ezinye izidingo zakho zesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Konke Odinga Ukukwazi Ngokuhamba EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feverything-know-traveling-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Iyuniyani yase-Europe i-eurotrip ulwazi UkuhambaUkuUku traveltips
U-Ela ungummeli wezokuvakasha. Uthando lwakhe lokuhamba lwakhula lapho esemncane ngakho-ke, waba ngumenzeli wezokuvakasha ukuze akwazi ukuhlinzeka ngolwazi, iseluleko, nezinsizakalo zokubhuka zabantu abafisa ukuhamba. Ngesikhathi sakhe sokuphumula, uyakuthanda ukufunda futhi ikakhulukazi labo abayizindaba ezihlobene nokuhamba. Injabulo nokwazisa kwakhe ngokuhamba kwamenza waqala ukubhala ngokuhlangenwe nakho kwakhe ngendlela angasiza ngayo abanye abathandi bokuhamba - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze Xhumana noRebecca
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izikhangibavakashi Europe
5 Izizathu Ukuze Ride Night Izitimela EYurophu
Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe